Netaanyaahuu: Waa'ee Yerusaalem ilaalchisee Paalestaayin dhugaa jiru fudhachuu qabdi - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Ministeerri Muummee Israa'el Yeruusaalem ''takkaayyu magaalaa gudditti biyya biraa kammiyyuu hin turre'' jedhan.
Ministeerri Muummee Israa'eel gara nagaatti deemu yoo barbaachise Yeruusalemiin ilaalchisee Paalestaayin dhugaa jiru ''sirriitti hubachuu'' qabdi jechuun dubatan.
Yerusaaleem waggoota 3000 darban keessatti magaalaa guddittii Israa'el turte malee ''takkaayyuu magaalaa gudditti saba kamiyyu hin turre" jechuun Beenjaamiin Netaanyaahuu dubbataniiru.
Kana kan dubbataniis Ameeriikaan Yeruusaaleem magaalaa gudditti Israa'el ta'u isheef beekumtii laachuun walqabatee wayita biyyoota Musliimaa fi Arabaa keessatti mormiin geggeeffamaa jirutti.
Dilbata jeequmsi naannoo imbaasii Ameerikaa Libaanoon keessatti argamuu fi bakkeewwan biroottis babal'ateera.
Yerusaaleem kessattis namni Paalestaayin tokko hojjetaa nageenyaa Israa'el, naannoo buufata atoobisiitti waraanee midhama guddaa irraan gahuun hidhameera.
Goodayyaa suuraa Jeequmsa naannoo Imbaasii Ameerikaa Libaanonitti uumame
Pirezidaantii Firaans Imaanu'eel Maakroon waliin erga haasa'anii booda, 'sabni Yihuudii baroota kumaatamaaf hidhata Yerusaalemii waliin qaban' fudhachuuf didu yaaluun waan hin amanamnedha jechuun obbo Netaanyaahuun dubbataniiru.
''Macaafa baay'ee gaarii ta'e - Macaafa qulqullu jedhamu kessatti dubbisuu ni dandeessu,'' jedhaniiru. ''Macaafa qulquullu irraa dubbisuu dandeessu, seenaa hawaasa Israa'el biyya ambaa hundaa keessa jiran irraas dhagahuu dandeessu... Yeruusaalem irraa kan hafe magaalaan guddittiin Israa'el eessa ta'e beeka?
''Paalestaayin dhugaa jiru kana akkuma dafanii fudhatanitti gara nagaatti deemuu dandeenya.''
Battaluma sanas dubbi himaan Itti-aanaa Pirezidaantii Ameerikaa, Maayik Peens, Pirezidaantiin Palestaayin Mahaamuud Abbaas sagantaa wayita Peens gara naanno sanaa deeman wal arguuf qaban diduun isaanii sirrii miti jechuun angawoota Paalestaayin qeeqaniiru.
Masrii keessattis geggeesitoota olaanoo amantii Muslimaa fi Kiristaanaa waliin haasa'uuf sagantaan obbo Peensiif qabamee ture murtee Ameerikaa kana mormuun akka hafu ta'eera.
Murtee pirezidaant Tiraamp Roobii darbee ilaalchisee balaallefannaan bakka hedduutti godhamaa jira - dhimma Yerusaaleem kan waldhabdee biyyoota Israa'eelii fi Paalestaayin gidduutti geggeefamaa jiru irratti dhiibba gudda kan uumuudha, al-loogummaa Ameerikaan waggoota hedduuf hordofaa turtes kan fallessee dha.
Magaalattiin kessattu Bahi Yerusaalem bakkeewwan qulqulluu amanti Yihuudii, Islaamaa fi kiristiyaanaa ta'uun kan beekamtuu dha.
Israa'el magaalaan Yerusaaleem yeroo hundaa iyyuu magaalaa gudditti ishee akka ta'e kan amantu wayita ta'u, Paalestaayin ammoo Yerusaaleem Bahaa - bara 1967 waraana ta'en Israa'eelin kan qabame haa ta'u malee magaalaa gudditti Paalestaayin kan fuula duraati jechuun amanti.